I-Villahi Igumbi Lokulala Elikhulu - I-Airbnb
I-Villahi Igumbi Lokulala Elikhulu
I-Villahi iyipharadesi labadali, indawo yokucasha yabashadikazi, indawo yokuphumula yomndeni, indawo yokuvakasha eyedwa.....ikhaya elikude nekhaya.
Itholakala endaweni ephethwe umndeni, leli gugu lingumakhelwane weGoldenEye Resort edumile. Kungaphakathi kwebanga lokuhamba ngezinyawo ukuya ebhishi laseJames Bond, izitolo ezinkulu, isitolo samahora angama-24 futhi sifinyelela kalula ezokuthutha zomphakathi.
Ilingana kahle nokubili, ingamumatha umuntu wesithathu ukuthi alale embhedeni wosuku. Izivakashi zifinyelela kuyo yonke indawo ehlanganisa igumbi lokulala elikhulu, igumbi lokugezela le-en-suite, ikhishi, indawo yokuwasha, indawo yokuhlala / yokudlela kanye ne-patio. Indawo okwabelwana ngayo kuphela yindlu yokuwasha.
4.79 · 122 okushiwo abanye
Indawo etholakala eduze kweGoldenEye Hotel & Resort, ikhaya langempela lombhali u-Ian Fleming owabhala amanoveli amaningi kaJames Bond ngesikhathi ehlala e-Oracabessa.
Imizuzu eyi-10 (uhambe) uzothola iJames Bond Beach kanye nemizuzu emi-5 (ngetekisi) iDolobha lapho ungathola khona izitolo ezinkulu, ikhefi ye-inthanethi, izitolo zezingubo, njll.
Ngizozama ngangokunokwenzeka ukuze ngibe khona ukuze ngibingelele futhi ngamukele zonke izihambeli, uma kungeyena umuntu othembekile ozokwenza kanjalo egameni lami. Ngiyafinyeleleka nganoma yisiphi isikhathi ukuze nginakekele izidingo zakho.
Ngizozama ngangokunokwenzeka ukuze ngibe khona ukuze ngibingelele futhi ngamukele zonke izihambeli, uma kungeyena umuntu othembekile ozokwenza kanjalo egameni lami. Ngiyafinyelelek…